लण्डन।गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सकारात्मक भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । संघको १०औँ महाधिवेशन सकेर सोमवार बेलायत फर्किएका डा. श ...
२०७८ चैत्र २० गते
वाराणसी । भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धार्मिक नगरी वाराणसीस्थित ललिताघाट, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिने वृद्धाश्रमको भूमिपूजनसहित शिलान्यास गरे ...
२०७८ चैत्र १ गते
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमानउपाध्यक्षद्वय रविना थापा र डा. बद्री केसीबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चितभएको छ । संघको निर्वाचन समितिले तोकेको समय सीमाभित्र दुई ...
एनआरएनएको अध्यक्षका लागि थापा र केसीको भिडन्त, आचार्य ‘रिङ आउट’
२०७८ फागुन २८ गते
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी नेतृत्वका लागि दुई जनाको दावेदारी परेको छ। अध्यक्ष पदमा अमेरिकाबाट रवीना थापा र रसियाबाट डा. बद्री केसीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। थापा र ...
एनआरएनए निर्वाचन : आज उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन, को-को छन् दाैडमा ?
लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकालको निर्वाचनका लागि आज शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन रहेको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार मार्च २४ र २५ मा हुने निर्वाचनका लागि ४० जना बढी ...
एनआरएनए अध्यक्षमा डा. केसीले दिए उम्मेद्‍वारी
काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्षमा पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघको यही मार्च २१ र २२ मा ह ...
युद्धभूमि युक्रेनबाट बाहिरिए ५११ नेपाली
२०७८ फागुन २० गते
काठमाडौं । रुस–युक्रेन द्वन्द्वबाट प्रभावित अधिकांश नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुगेका छन् । जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्काले हालसम्म युक्रेनबाट नेपाली सुरक्षित स्थानको ...
युक्रेनमा रहेका सबै नेपाली बाहिरिए, ३०२ नेपाली छिमेकका देश पुगे
२०७८ फागुन १८ गते
काठमाडाैं। युद्धग्रस्त मुलुक युक्रेनकाे राजधानीबाट सबै नेपाली बाहिरिएका छन्। रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित ३ सय २ जना नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेका हुन् । जर्मनीका लागि नेपाली राज ...
गोर्खाज र एनआरएन यूकेको लोगोसहित बक्सिङमा भिड्दै जोन राइडर
२०७८ माघ १६ गते
लण्डन । आगामी १२ फेब्रुवरीमा हुन गइरहेको बक्सिङ प्रतिस्पर्धामा पूर्वडब्ल्यूबीसीका च्याम्पियन जोन राइडरले एनआरएनए यूके र गोर्खाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । बक्सिङको संसारमा उपना ...
कञ्चनपुरका युवाले गरे पोर्चुगलमा आत्महत्या
लण्डन । विगत तीन वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका एक नेपाली युवकले आत्महत्या गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका महासचिव राज कुमार थापाका अनुसार ३८ वर्षीय तर्कराज भट्टले बिहीबार रुख ...
काठमाडौं । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक ...
एनआरएनए केन्द्रीय समितिको बैठक जनवरी १५ मा
लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएं) कोे ८१ औं बैठक आगामी साता बस्ने भएको छ । संघका महासचिव डा हेमराज शर्माका अनुसार सो बैठक जनवरी १५ का दिन नेपालको समय अनुसार दिउँसो दुई बजे बस्ने गरि डाकिएको हो । ...
२०७८ पुस ११ गते
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको आइतवार र सोमवार हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको छ । संघको प्रतिनिधि विवाद मिलाउने जिम्मा लिएका अध्यक्ष कुमार पन्तले ४ महिनासम्म विवाद टुंग्गो लगाउन न ...
एनआरएनए प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा बन्जरा नियुक्त
२०७८ मंसिर २७ गते
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा भीमसेन बन्जरा नियुक्त भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार उनलाई संघको १०औँ महाधिवेशनमा निर्वाचन ...
एनआरएनएको निर्वाचन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनएलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासल ...
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को महाधिवेशनबारे अन्योल कायमै रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको विधानअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ । कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्त ...
पूर्ण खोप लगाएकाले डिसेम्बर १ देखि अष्ट्रेलिया प्रवेश पाउने
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले डिसेम्बर १ देखि पूर्ण खोप लगाएकाहरुलाई प्रवेश अनुमति दिने भएको छ । सोमबार आफ्नो यात्रा नियम थप खुकुलो पार्दै उसले पूर्ण खोप लगाएका पर्यटकलाई यात्रा छुटको लागि आवेदन नै न ...
अमेरिका जाने डिभी चिठ्ठा खुल्यो, कसरी भर्ने ?
काठमाडौं । अमेरिकाले सन् २०२३ का लागि ईडिभी चिट्ठा खुला भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली समयअनुसार बुधबार बेलुका ९स्४५ देखि डिभी चिट्ठा खुला भएको हो । डिभी भर्न ‘अमेरिकी स्टेट गभर्मेन् ...
वैदेशिक रोजगारीमा गएका तामाङको कुवेतमै मृत्यु
दोहा । सवारी दुर्घटनामा परी कुवेतमा एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । रसुवाका किप्पा नेकोर तामाङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जनाइएको छ । गत सोमबार कम्पनीको काम सकेर कोठामा पुगेका उनी किनमेल गर्न गएक ...
अमेरिका बस्दै आएका सोलुखुम्बुका एकै घरका ३ जनाको आँधीमा परी मृत्यु
२०७८ भदौ १८ गते
न्यूयोर्क । न्यूयोर्कमा आएको आइडा नामक आँधीमा परी ३ जना नेपालीको दुखद निधन भएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यमा आएको पछिल्लो प्राकृतिक विपत्ति वर्षापछि घर भित्र पानी पसेर आङ गेलु शेर्पा, उनकी श्रीमती ...
डायमण्ड बुद्धिष्ट सेन्टरको पहलमा लण्डनमा नेपालीको गुम्बा
बेलायत । बेलायतको लण्डन शहरको दक्षिण पूर्वमा रहेका बुद्ध धर्म अनुयायी नेपालीले गुम्बा स्थापना गरेका छन् । डायमण्ड बुद्धिष्ट सेन्टर नामक संस्थाको पहलमा बनेको उक्त गुम्बाको क्षेत्रफल एक हजार ६६८ स ...
काम गर्नका लागि कुवेत गएकी कुश्माकी एक महिलाको मृत्यु
२०७८ भदौ ११ गते
पर्वत । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी एक महिलाको त्यहीँ मृत्यु भएको छ । कुश्मा नगरपालिका–११, गैरीटोल घर भई केही वर्ष अघिदेखि कुवेतमा कार्यरत पुतली परियारको मृत्यु भएको हो । परियारको २४ अग ...
आचार्यद्वारा एनआरएन अध्यक्षमा उम्मेवारी दिने घोषणा
२०७८ भदौ ५ गते
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को केन्द्रीय अध्यक्षमा कुल आचार्यले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । वर्तमान सल्लाहकार आचार्यले गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिको सुरक्षा, लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित ...
लन्डनमा तोडियो गोर्खालीको अनशन, बेलायती रक्षाराज्यमन्त्रीले खुवाए १३औँ दिनमा जुस
कृष्णप्रसाद शर्मा/रासस २०७८ भदौ ४ गते
लन्डन । समान पेन्सनलगायतका माग राख्दै १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका पूर्व गोर्खाले बिहीबार अनशन तोडेका छन् । जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनशनपछि पछिल्लोपटक १३ दिनदेखि आमरण अनशन बस्दै आएका ज्ञानराज राई, ...
बेलायतमा गोली चल्यो, ३ वर्षीया बालिकासहित ३ को मृत्यु, २ घाइते
२०७८ साउन ३० गते
लन्डन । बेलायतमा गोली लागी ३ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिणपश्चिमी शहर प्लाइमाउथमा एक व्यक्तिले चलाएको गोली लागी एक बालिकासहित कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको बेलायती प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरीका अ ...
गोर्खाप्रतिकाे अपमानजनक व्यवहार तत्काल अन्त्य हुनुपर्छः बेलायती विपक्षी दल
२०७८ साउन २८ गते
लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री निवास नजिक आफ्ना माग पूरा गर्न गत शनिबारदेखि आमरण अनशन बसिरहेका भूपू गोर्खाहरूको आन्दोलनप्रति यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । विपक्षी ...
भूपू गोर्खा अनशनकारीमाथि बेलायती प्रहरीको हस्तक्षेप, अनशनकारीको त्रिपाल प्रहरीले हटाइदियो
२०७८ साउन २७ गते
लन्डन । भूपू गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवासमा शनिबारदेखि थालेको आमरण अनशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बेलायती कानूनअनुसार सो क्षेत्रमा त्रिपाल राख्न नपाइने भन्दै प्रहरीले मङ्गलबार त्रिप ...
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मकाउले नव-निर्वाचित अध्यक्ष राजेश प्रसाईको अध्यक्षतामा बनेको कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको छ । एनआरएन मकाउमा राजेश प्रसाईको अध्यक्षतामा प्रथम उपाध्यक्ष&nda ...
शालीन छविका तिमल्सेनाको एनआरएनए युरोप संयोजकमा उम्मेदवारी
काठमाडाैं । गैर आवासीय नेपाल (एनआरएनए) युरोपका वर्तमान उपसंयोजक कृष्ण तिमल्सेनाले संयोजक पदका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । हाल युरोप उपसंयोजक रहेका तिमल्सेना लन्डनमा बस्दै त्यहाँ रहेका नेपाली ...
सोल । दक्षिण कोरियामा एनआरएन दक्षिण कोरियाका क्षेत्रीय अध्यक्ष मदन भुजेलको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ । चुङ्नाम क्षेत्रका अध्यक्ष भुजेल शनिबार साँझ साथीहरूसँग फुटबल खेलेर केहीबेर आराम गर्ने क ...